တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲမှာ အပေါ်ယံသာပါဝင်ခဲ့ခြင်းကို ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှု့တွေခံလိုက်ရတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်…. – Cele Oscar
တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲမှာ အပေါ်ယံသာပါဝင်ခဲ့ခြင်းကို ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှု့တွေခံလိုက်ရတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်….
ပရိသတ်ကြီး ရေ မင်းသမီး ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ( ၁ )ရက်နေ့ အာဏာသိမ်းခံ လိုက်ရ ချိန်တွင် တရား စခန်းဝင် နေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အပြစ်ပြောခြင်းတွေ ခံခဲ့ ရသူ ပါနော်။ သို့ပေမယ့် လည်း တရား စခန်းက ပြန်ထွက် လာချိန် မှာတော့ ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် ရာတွင် ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရတာ ကြောင့် သူမကို ဝေဖန်တာ တွေ လျော့ကျခဲ့ ကြပါ တယ်နော်။
လွန်ခဲ့တဲ့ လ ကတော့ သူမရဲ့Facebook Page အဟက်ခံ ခဲ့ရ တာကို အကြောင်းပြပြီး နွေဦး တော်လှန်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမတင် တော့တာ အခုထိ ပါပဲနော်။ ဒါတင် မဟုတ်သေးဘဲ ကိုယ်တိုင် ဆန္ဒထွက် ပြခဲ့တဲ့ ပို့စ်ကိုလည်း ပြန်လည် ပြင်ကာ တင်ထား တာပါနော်။ အခုလော လောဆယ် မှာတော့ ဝတ်မှုန် ရွှေရည်ရဲ့ ကိစ္စဟာ အတော် လေးကို လူပြောများနေတာပါနော်။
နာမည်ကြီး Travel Blogger တစ်ဦးမှလည်း ” နာမည်ကြီး အကယ်ဒမီ မင်းသမီး CDM support လုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Post ကို Edit လုပ်သွားတယ်(သူ CDM ကို support မလုပ်တော့ပါဘူးပေါ့)ကဲ ……..အဖြေက ရှင်းရှင်းလေး CDM သည် သူတို့ရဲ့ အညှာ၊ CDM သည် အောင်ပွဲရဲ့သော့ချက် ၊CDMသမားများကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီပါ၊ CDMသမားများ ကျေးဇူးပြု၍ တောင့်ခံ ပေးကြပါ၊ အခုထိ ရပ်ရွာ အဆင့်တောင် အုပ်ချုပ်ခွင့် မရသေးတာ CDM ဘယ်လောက် အောင်မြင်လဲ ဆိုတာရဲ့ သက်သေပါ #အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် “ ဆိုပြီး ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ရဲ့ လုပ်ရပ် တွေကို ရှုံ့ချထား ပါ သေးတယ်နော်။
ပရိသတျကွီး ရေ မငျးသမီး ဝတျမှုနျရှရေညျ ကတော့ ဖဖေျောဝါရီလ( ၁ )ရကျနေ့ အာဏာသိမျးခံ လိုကျရ ခြိနျတှငျ တရား စခနျးဝငျ နတောကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အပွဈပွောခွငျးတှေ ခံခဲ့ ရသူ ပါနျော။ သို့ပမေယျ့ လညျး တရား စခနျးက ပွနျထှကျ လာခြိနျ မှာတော့ ပွညျသူတှေ နဲ့ အတူ ဆန်ဒ ထုတျဖျော ရာတှငျ ပါဝငျလာတာကို တှရေ့တာ ကွောငျ့ သူမကို ဝဖေနျတာ တှေ လြော့ကခြဲ့ ကွပါ တယျနျော။
လှနျခဲ့တဲ့ လ ကတော့ သူမရဲ့Facebook Page အဟကျခံ ခဲ့ရ တာကို အကွောငျးပွပွီး နှဦေး တျောလှနျရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ဘာမှမတငျ တော့တာ အခုထိ ပါပဲနျော။ ဒါတငျ မဟုတျသေးဘဲ ကိုယျတိုငျ ဆန်ဒထှကျ ပွခဲ့တဲ့ ပို့ဈကိုလညျး ပွနျလညျ ပွငျကာ တငျထား တာပါနျော။ အခုလော လောဆယျ မှာတော့ ဝတျမှုနျ ရှရေညျရဲ့ ကိစ်စဟာ အတျော လေးကို လူပွောမြားနတောပါနျော။
နာမညျကွီး Travel Blogger တဈဦးမှလညျး ” နာမညျကွီး အကယျဒမီ မငျးသမီး CDM support လုပျပါတယျဆိုတဲ့ Post ကို Edit လုပျသှားတယျ(သူ CDM ကို support မလုပျတော့ပါဘူးပေါ့)ကဲ ……..အဖွကေ ရှငျးရှငျးလေး CDM သညျ သူတို့ရဲ့ အညှာ၊ CDM သညျ အောငျပှဲရဲ့သော့ခကျြ ၊CDMသမားမြားကို အတတျနိုငျဆုံး ကူညီပါ၊ CDMသမားမြား ကြေးဇူးပွု၍ တောငျ့ခံ ပေးကွပါ၊ အခုထိ ရပျရှာ အဆငျ့တောငျ အုပျခြုပျခှငျ့ မရသေးတာ CDM ဘယျလောကျ အောငျမွငျလဲ ဆိုတာရဲ့ သကျသပေါ #အရေးတျောပုံ အောငျရမညျ “ ဆိုပွီး ဝတျမှုနျရှရေညျ ရဲ့ လုပျရပျ တှကေို ရှုံ့ခထြား ပါ သေးတယျနျော။
“” နိုင်ကိုနိုင်ရမည် “” သီချင်းမှာ သူ့နာမည် မတပ်ဖို့ပြောရာမှ ထုတ်လုပ်သူ နဲ့ ပြဿနာတက်ခဲ့တဲ့ ဆိုဖီယာ ရဲ့ အသံဖိုင်